7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa 2021 | AASraw
7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa 2021
/blog/Gallery/7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa 2021
Posted on 08 / 31 / 2018 by 阿斯劳 ku qoray Gallery.
Sifeynta Maqalka ee Smart
Nootropics waa magaca daroogada cusub ee daroogada cusub ee Silicon Valley. Waxay ballanqaadayaan waxqabad badan oo maskaxeed waxaana ay hadda si degdeg ah uga faafayaan Xeebta US West Coast. Khubarada ayaa ka digaya khatarta ka iman karta dhaqanka cusub.
Noootropics, oo loo yaqaano sida daroogada caqliga leh, kiciyeyaasha xusuusta, iyo xoojiyeyaasha garashada, waxay yihiin daroogo kor u qaada hawlaha maskaxda ee maskaxda (farsamooyinka iyo awoodaha maskaxda) sida garashada, xusuusta, sirdoonka, hal-abuurka, dhiirigelinta, dareenka iyo fiirsashada. Xaaladaha badankood waxaa loola jeedaa farsamooyinka ficil-celinta nootropics. Waxaa la rumeysan yahay in nootropics ay ka shaqeynayso bedelida helitaanka qalabka neurokimaynta ee maskaxda (neurotransmitters, enzymes iyo hormoonnada), iyada oo la hagaajinayo ama lagu dhaqaajinayo dheef-shiid kiimikaadka maskaxda, ama kor u qaadista koritaanka neuronal (neurogenesis).
Ereyga "nootropic" waxaa soosaaray 1972 dhaqtarka reer Romania Corneliu E. Giurgea (1923-1995). Giurgea wuxuu ku lug lahaa soo saarista walaxda piracetam ee 1964, oo hadda ah mid ka mid ah buunotopics ugu caansan. Wuxuu doortay ereyga isbarbardhiga ereyga ah ee ereyga nafsaaniga ah.
Giurgea waxa uu ahaa Professor of Neurophysiology ee Farsamada Caafimaadka ee Bucharest iyo Belgium ee 1963 wuxuu noqday madaxa Neuropharmacology ee UCB.
Sida laga soo xigtay Giurgea, nootropics waa daroogo la wadaago sifooyinka asaasiga ah ee burcad-badeedda, sida:
1. Dhaqdhaqaaq toos ah ee hawlaha isdhexgalka ee maskaxda, taas oo soo bandhigta saameyn deg deg ah maskaxda.
2. Hawlgalkani waa inuu si xushmad leh u saameeyaa teligenphalon oo uusan muujin heerarka kale ee maskaxda.
3. Si aad u sameyso saameyn restorative dhibaatooyinka maskaxda ee waxqabadka maskaxda sare.
Maado kasta oo nootropic ah marka loo eego shuruudaha Giurgea waxay dhab ahaantii hagaajin kartaa garashada. Maado leh saameyn garasho wanaagsan ayaa kaliya nootropic ah macnaha qeexitaanka haddii ay sidoo kale leedahay saameyn neuroprotective oo ay ka madhan tahay sunta. Kiciyeyaasha maskaxda sida amphetamine ma ahan wakiilo nootropic ah oo ku jira dareenka adag, in kastoo ay keeni karaan kor u qaadista garashada, maadaama laga yaabo inay la xiriiraan waxyeelo sun ah.
Daraasado ku saabsan saameynta nootropics ayaa muujisay saameyno kala duwan oo farshaxan ah; laakiin hal nooc oo saameyn ah oo saameyn ah oo wadaagaya fasalka oo dhan ma'aha mid baahsan. Dhammaan xaqiiqooyinka waxay saameyn ku yeelanayaan shaqeynta cholinergic: Kordhinta korriinshaha kor u kaca waxay kordhisaa wax soo saarka iyo gaaska acetylcholine, oo wax ka qabta dukaamada muscarinic iyo nicotinic. Piracetam ayaa sidoo kale kordhiya cufnaanta reseptors acetylcholine ee kortex hore ee 30% -40%.
Gaadiidka tamarta ee qaabka adenosine triphosphate (ATP) ayaa muhiim u ah badbaadada maskaxda. Unugyada maskaxdu waxay u baahan yihiin inay helaan ATP-ga ay ka qaataan gulukooska iyo oksijiinka mana qaadi karaan ATP-ta unugyada kale. Piracetam wuxuu kobciyaa waxqabadka of adenylate kinase enzyme, taas oo bedesho adenosin diphosphate (ADP) galay ATP iyo adenosine monophosphate (AMP). Tani waxay hoos u dhigeysaa hoos u dhigista ATP ee maskaxda ee hypoxia waxayna xoojineysaa ka soo kabashada hypoxia, sidoo kale sababtoo ah kordhinta glycolysis oxidative.
Qaabka kale ee ficilku waa hoos u dhigidda qulqulka taranka iyo hagaajinta xajmiga xajmiga xajmiga, taasoo la maleynayo in lagu daro phospholipids xuubka.
Waxyeellooyinka guud ee noocaas ah nootropics waxaa ka mid ah:
• Cunug aad u sarreeya ama dareen-xumo
• Nasasho la'aanta iyo xanaaqa ayaa sheega ilaa gardarrada
• jimicsiga jidhka
• Niyadjab iyo welwel
• Hurdada ama hurdada
• Lalabbo leh matag
• xanuunka caloosha
• Shuban ama korodh miisaanka
Mararka qaarkood waxaa jira sidoo kale dawakh ama daciifnimo, yaraanta cadaadiska dhiigga ama kor u kaca iyo libido kordhaya.
Maaddooyinka leh sifooyinka soo socda ayaa loo qoondeeyay buotopics:
• Dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa maskaxda oo dhiirigeliya saamaynta maskaxda
• Saameynta maskaxda, meelaha kale ee maskaxda ah waa laga yaabaa inaan saameyn
• Hagaajinta barashada
• Saameynta xasuusta
• Xoojinta dabeecadaha iyo xusuusta la bartay
• Kordhi waxtarnimada qaababka xakamaynta koontada maskaxda
• Ha iska dhaafin saameynta daawooyinka nafsiga ah
• Saameyno yaryar oo yar, qarsoodi yar
Suuqa suuqa xorta ah nootropics
Sanadihii la soo dhaafay, suuqa nootropics wuu koray. Maaddooyin badan ayaa leh oggolaansho ku meel gaar ah ama saameyntooda lama xaqiijin. Mararka qaarkood daraasado muddo-dheer ah oo ku saabsan dhibaatooyinka soo raaca ayaa maqan. Waxaa jira farqi cad oo u dhexeeya daroogada iyo walxaha kale. Qeexid ahaan, walax kasta oo si togan u saameysa waxqabadka maskaxda waa wakiil nootropic ah haddii ay leedahay saameyn neuroprotective ah oo aan sun ahayn. Dareenkan, walxaha sida amphetamine kuma jiraan nootropics maadaama ay sun yihiin.
Muuqaalka guud ee nootropics-ka ayaa ah inay dhammaantood taageeraan oo ay xoojiyaan neerfaha gudbiya maskaxda iyo meertooyinkooda. "Tamarta maskaxda" waa adenosine triphosphate (abk. ATP), oo sameysa unugyada maskaxda lafteeda sonkorta iyo oksijiinta. Tusaale ahaan, piracetam wuxuu fududeeyaa oo xoojiyaa wax soo saarka ATP iyadoo lagu jiro xaalad oksijiin la'aan ah. Waxay kaloo kordhisaa socodka dhiigga ee maskaxda, isticmaalka oksijiinta iyo dheef-shiid kiimikaadka.
7 Best Nootropics(Daroogada Smart) ee suuqa 2021
Nootropics waxaa loo kala saari karaa sida loo isticmaalo:
Armodafinil waa daawo ka socota kooxda nafsaani-yaqaanka, taas oo si weyn ugu kala duwan qaab dhismeedkeeda molikiyuullada ee kiciyaasha ku saleysan amfetamine. Waxay u taagan tahay (R) -inantiomer ee modafinil ee tartanka kula jira.
Waxaa loo adeegsadaa naccolepsy, niyadjab, hurdada idiopathic ama nikolepsiga oo hurdo xad dhaaf ah inta lagu jiro maalintii.
1. Neefta alerjiga ee alaabtan.
2. Isbedelada dheecaanka dhiigga ee dheecaanka, isbedelka isdhigista unugyada wadnaha, xannuunka laabta, xajmiga ama muujinta daaweynta kicinta mitral-kaca iyo soo-qaadista miyir-wareerka dhow, bukaanka aan xannibi karin naafada.
1. Daawada waa in laga bilaabo qadar yar (50 ~ 100mg maalin kasta), 50mg kasta 4 ~ 5 kasta, illaa qiyaasta ugu wanaagsan (200 ~ 400mg maalin kasta).
2. Qiyaasta bukaanka qaba dhaawacyada beerka daran ayaa la jaraa, xaddiga kelyaha iyo qiyaasta bukaanada waayeelka waa in la yareeyaa.
3. Cudurka dheeraadka ah wuxuu keeni karaa hurdo la'aan, calaamadaha habdhiska dhexe ee dareenka, sida xasiloonida, jahawareerka, jahwareerka, jimicsiga, muuqaalka, dheef-shiidka, nidaamka dheef-shiid kiimikaadka ayaa dhici karta in lallabo, shuban, habka wadnaha iyo xididada wadnaha ku dhaca oo ku dhici kara tachycardia, bradycardia, cadaadis dhiig oo sarreeya, xanuunka feeraha. Badeecadani ma laha antidote gaar ah, waana in lagu taageeraa xaddi badan.
4. Iska ilaali cabitaanka khamriga ah adigoo isticmaalaya sheygan.
5. Dadka qaba taariikhda jirada maskaxda waa in loo isticmaalaa taxadar.
6. Saamaynta sunta waxaa lagu qeexay sida C, iyo isticmaalka dumarka uurka leh waa inay miisaamaan qadarinta iyo khasaaraha.
7. Badbaadada daawada loogu talagalay carruurta ka yar da'da 16 sano laguma qiimeyn.
1. Madax xanuunka oo dhan, xanuunka dhabarka, calaamadaha ifilada ah, xanuunka feedhaha, qarqaryo, iyo qoorta.
2. Dhiig-baxa wadnaha, xidid-yaraanta, is-beddelka, isdhexgalka.
3. Nidaamka dheef-shiid kiimikaadka, shuban, caloosha, afka qalalan, lumitaanka rabitaanka cuntada, caloosha, shaqada beerka oo aan caadi ahayn, suuxdin, sameynta boogaha afka, afka oo qalalan, harraad.
4. Naasnuujinimada habka hemolymphatic eosinophilia.
5. Edabis Cusub
6. Nervous system nervousness, hurdo la'aan, walaac, madax-wareer, niyad-jabka, murqaha, lethargy, hypertonia, dyskinesia, macquul-daro, xanaaq, wareer, jahawareer, xasillooni dareen, dawakhaad.
7. Neefsaarida nidaamka neefsashada, faranjiraha, cudurada sanbabada, epistaxis, neefta.
8. Dhalashada dhididka, herpes simplex.
9. Dareen gaar ah amblyopia, cillado muuqaal ah, dhadhanka leexday, xanuunka indhaha.
10. Nidaamka urojiinka jirka ee aan caadiga ahayn kaadida, hematuria, pyuria.
Oral, 200 ~ 400mg maalin walba, subaxdii la qaado. Qiyaasta shaqada beerka ee daran waa in la yareeyo 1 / 2 ee qiyaasta caadiga ah.
1. Cudurka kelyaha ee CYP3A4 sida karbamazepin, itraconazole, ketoconazole ama phenobarbital, rifampicin CYP3A4 inducer iyo modafinil waxay badali kartaa diirada dhiigga ee alaabtan.
2. Cuntadani waa CYP3A4 inducer, taas oo hoos u dhigeysa diirada dhiigga ee wareegga dhiigga ee 50% waxaana sidoo kale hoos u dhigaa diiradda qulqulka daaweynta daawada.
3. Badeecadani waa CYP2C19 inhibitor, taas oo kordhisa diiradda dhiigga ee warfarin, diazepam iyo phenytoin. Waxyaabahani waxay sidoo kale kordhin karaan daawooyinka tricyclic antidepressants, chlorpromazine iyo omeprazole. Dhiirrigelinta dhiigga ee daroogada sida lansoprazole iyo propranolol. Marka la mariyo daawooyinka kor ku xusan, qiyaasta daawada waa in la isku hagaajiyaa, waana in la ilaaliyaa dhiigga.
4. Waxyaabahani waxay yareyn karaan saameynta daaweynta ee p-pillerka. Tallaabooyin kale oo looga hortago uur-qaadis kale waa in la qaataa inta lagu jiro isticmaalka badeecadaan iyo hal bil gudaheed ka dib joojinta daroogada
Modafinil waa soojiifiye toos ah oo loo isticmaalo daaweynta xanuunada sida nikotoolka, isbedelka hurdada shaqada ee shaqada, iyo hurdo xumo badan oo la xidhiidha hurdada hurdada ah. Modafinil sidoo kale waxaa loo isticmaalaa meel ka baxsan calaamadaha sida korriinka garashada.
1. Daaweynta narcolepsy: narkolepsy waa cudur ku dhaca habdhiska neerfaha ee sababa lama yaqaan sababta. Calaamadaha ugu waaweyn ayaa ah in aysan soo jeedin karin ama feejignaan karin inta lagu jiro maalinta, waxaana jira dhacdooyin hurdo oo aan la joojin karin iyo safarro. Bukaanku badanaa ma sameyn karaan cudurro iskood u sameysan. Hurdada oo aan awoodin inuu si caadi ah u noolaado. Nooc cusub oo daroogo ah oo soo kiciya, Modafinil wuxuu bukaanleyda ka dhigi karaa inay ka takhalusaan lulmo maalmeedka isla markaana ilaaliyaan shaqada caadiga ah, laakiin ma jiri doonaan falcelinno aan fiicnayn sida xiisaha aan caadiga ahayn. Daawada ugu fiican ee hurdo la'aanta. Daraasaduhu waxay muujiyeen in modafinil uu si wax ku ool ah u wanaajin karo astaamaha isla markaana si weyn u yareyn kara xaddiga hurdada iyo tirada maalmaha inta lagu jiro maalinta iyada oo aan saameyn ku yeelan waqtiga iyo tayada hurdada ee habeenkii. Oda modafinil waxaa la siiyay 18 bukaan ah oo leh narkolepsis lama filaan ah iyo 24 bukaan oo qaba narcolepsy qiyaas maalinle ah 200-500 mg / maalin. Natiijooyinka waxay muujiyeen in hurdo iyo daal laga arkay bukaanada qaba daroogada iskeed u sameysa iyo narcolepsy. Hurdada ayaa si weyn hoos loogu dhigay, iyadoo wadarta guud ee waxtarka leh ay ahayd 83% iyo 71%, siday u kala horreeyaan. Modafinil wuxuu kaloo ka hortagi karaa cudurka dyskinesia ee maskaxda ee ay sababto hurdo yaraanta, wuxuu hagaajiyaa shaqada garashada, wax saameyn ahna kuma yeesho bilowga, dayactirka, baraaruga iyo halabuurka jiifka habeenkii, sidoo kale saameyn kuma yeelanayo hab dhaqanka subaxa iyo xaakada maalinta.
2. Daaweynta astaamaha unugyada noolaha ee la yiraahdo "encephalopathy syndrome": Modafinil ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu daaweeyo cudurrada "encephalopathy syndrome" ee khamriga ah. Dadka qaarkood ayaa isticmaala modafinil si loo daweeyo khamriga encephalopathy ee aalkolada nool, oo lagu sameeyay baadhitaano cilmi nafsiyeed oo cilmi baaris ah iyo daraasado neerfisi ah. Natiijooyinka ayaa muujiyay in modafinil uu kordhay hurdada ka dib markii uu qaatay daawada maalin kasta, iyo heerka daaweynta daaweyntu waxay ahayd 85%. Qiyaasta waxtarka ee sheygani waa 200 ~ 400 mg maalintii, laba jeer subaxdii iyo dhexda ayaa la qaaday.
3. Horumarinta saameynta daaweynta daawooyinka anti-depressant: Sababtoo ah dabeecadda hoose ee modafinil waxay keenaysaa in ay ku rajo geliso beddelka kiciyaasha kale, waa dhiirigelin daroogada ka horjoogsanaya daawada.
4. Daaweynta dareenka maqnaanshaha / jirradu waa: caddaynta kiliinikada waxay soo jeedineysaa in modafinil uu wanaajin karo carruurta leh feejignaanta maqnaashaha / ciladda feejignaanta (ADHD).
Noopept waa peptide nootropic. Noopept wuxuu kordhiyaa awooda wax lagu barto, wuxuu hagaajiyaa xasuusta, isagoo saameyn ku yeelanaya dhammaan wejiyada geeddi-socodka: soo-saarka, isku-dhafidda iyo dib-u-helidda macluumaadka. Daroogadu waxay ka hortagtaa horumarinta dhiig-yaraanta sababta oo ah shoogga korantada, maqnaansho wejiga qumman ee hurdada, iyo sidoo kale xannibaadda qaabdhismeedka glutamatergic iyo central resoltor qaabdhismeedka.
Saameynta neuroprotective ee daroogada Noopept waxaa lagu ogaaday by kordhinta iska caabin ah ee unugyada si hypoxia, dhaawacyada sunta ah iyo traumatic. Muuqaalka trombotic ee istaroogga, Noopept wuxuu yaraynayaa miisaanka laf dhabarta, wuxuuna sidoo kale ka hortagayaa geerida unugyada cerebellum iyo kortenska maskaxda, kuwaas oo la socda qiyaasaha neurotoxiska ee glutamate iyo ogsiji xagjirka xorta ah. Intaa waxa dheer, noopept yaraynaysaa darnaanta calcium xad-dhaaf ah, waxay kor u qaadeysaa caadada ah ee sifooyinka milanka dhiigga (sababtoo ah fibrinolytic, falgal anticoagulant iyo fal-celinta antiagregatory).
J147 CAS 1146963-51-0 waa daawo tijaabo ah oo loo isticmaalo daaweynta cudurka Alzheimers iyo waallida. Daawada tijaabada ah ee loo yaqaan J147 waxay noqon kartaa elixir casri ah. Daraasaduhu waxay muujiyeen inay si wax ku ool ah u daaweyn karto cudurka Alzheimers isla markaana ay u rogi karto gabowga jiirka. Saynisyahannadu sidoo kale waxay diyaar u yihiin inay u isticmaalaan daroogada tijaabooyinka caafimaad ee aadanaha. Dhawaan, warbixin cilmi-baaris ah oo lagu daabacay majaladda caalamiga ah ee 'Aging Cell', cilmi-baarayaal ka socda Machadka Salk ayaa soo bandhigay habka meerkulka ee J147 u shaqeeyo. Waxay ogaadeen in J147 uu noqon karo borotiin mitochondria. Isku dar si kor loogu qaado unugyada gabowga, jiirka, iyo duqsiga miraha oo u muuqda kuwo da 'yar.
Cilmibaare Dave Schubert wuxuu yiri in daraasadan aan ku ogaannay xiriir ka dhexeeya daroogada tijaabada ah ee J147 iyo gabowga jirka, cudurka Alzheimers; raadinta bartilmaameedka J147 waxay muhiim u noqon kartaa daaweynta bukaan socodka. Horaantii 2011, waxaan soo saarnay daawada J147, oo ah nooc wax laga badalay oo ah curmerka dhir udgoon. Tan iyo markii la soo saaray J147, cilmi baarayaashu waxay ogaadeen inay si wax ku ool ah u beddeli karto cilladaha xusuusta qofka isla markaana ay suurtagal tahay inay kor u qaadaan unugyada maskaxda ee cusub. Isla mar ahaantaana, way yareyn kartaa ama beddeli kartaa cudurka Alzheimers ee jirka jiirka, laakiin cilmi-baarayaashu ma aysan caddeyn sida J147 ay ugu shaqeyso heerka molikal.
Daraasado badan ayaa horeyba u eegay saameynta huperzine ee daaweynta Alzheimers. Nasiib darrose, natiijooyinkan imtixaanku macno badan ma lahan, maadaama xaaladaha badankood ay tiro yar oo ka-qaybgalayaashu joogeen, ama qaababkii imtixaanka la isweydiin karo loo adeegsaday.
Falanqaynta meta ee dhowr waraaqood oo cilmi baaris ah, horumarin ayaa lagu arkay (bukaanada Alzheimers) meelaha soo socda: xirfadaha garashada, xaalada guud, iyo waxqabadyada maalinlaha ah. Nasiib darrose, guud ahaan waxaa jira cilmi-baaris yar oo ku saabsan pramiracetam, laakiin 10-kii sano ee la soo dhaafay, hal daraasad oo ku saabsan walaxda lama daabicin.
Phenylpiracetam waa wakiil nootropic oo si waxtar leh u saameeya awoodda maskaxda waxaana loo tixgeliyaa inuu yahay mid fudud. Sida magacu soo jeediyo, waa isbeddelka burcad-badeedda, oo leh koox dabeecad oo dheeri ah.
Waxaa loo maleynayaa, waa xilliyada 20-60 sida xooggan (oo ku salaysan mabda'a) sida walxaha waalidka.
Daraasaddan marka la barbardhigo labadaba, phenylpiracetam ayaa loo tixgeliyey inay ka xoog badan tahay burcad-badeedda meelaha soo socda:
Neuroprotection, anti-amnesia, iyo kicinta.
Magacyada kale: Fonturacetam, (RS) -2- (4-phenyl-2-oxopyrrolidine-1-yl) acetamide, phenotropil, carfedone
Iyadoo loo eegayo qaabdhismeedka qaabdhismeedka leh ee phenethylamine ee maaddada, kuwaas oo qaabdhismeedka molecular uu leeyahay guryaha kicinta, waxaa loo maleyn karaa in ay jirto xiriir la leh soo celinta adrenaline iyo dopamine.
Sida laga soo xigtay horumarinta Phenotropil waxay kordhisaa heerarka soo socda ee maskaxda: socodka dhiigga, epinephrine, dopamine, iyo serotonin. Si kastaba ha ahaatee, wax saameyn ah kuma lahan GABA.
Warqad cilmi baaris oo Maraykan ah (oo leh jiirka) waxaa jira calaamado muujinaya heerarka korodhka ah ee acetylcholine iyo NMDA reseptors, iyo hoos u dhac ku yimaadda serotonin iyo duubo dopamin.
Amniga & Raadka Side
Sida Racetams oo dhan, waxaa si wanaagsan ugu dulqaata jirka aadanaha; Khatarta waxyeellooyinka waa yar tahay - illaa inta lagu cabayo qaddar macquul ah (eeg Qaadashada & Dulqaadka).
Phenylpiracetam waa in aan la qaadin xilliga uurka ama naas-nuujinta. Sidoo kale bukaanka qaba beerka ama kalyaha ayaa waxtar u leh inay sameeyaan.
Saameynaha caadiga ah ee kiciyaasha ayaa sidoo kale jira, sida: dareenka walwalka, xanaaqa, ama jahawareerka.
Isticmaalayaasha qaarkood waxay soo sheegaan madax xanuun. Kuwani waxay ku dhici karaan dhammaan Racetamen, haddii maskaxda ay yar tahay asetylcholine yaraanta. Sida antidote, waxaad si fudud ugu darsataa ilo ku xiran xargahaada.
Jiirka, qiyaasta halbowlaha ah ee culeyska jirka ee 880mg / kg ayaa la ogaadey, isagoo tilmaamaya marin-celin xagga ammaanka ah oo ka yimid qiyaasta lagu taliyey.
Marka loo eego soo saaraha, ma jiraan wax saameyn ah tetralogic, mutagenic ama kansarka saamiga.
Sunifiram waxay la xiriirtaa Racetamen qaab dhismeed kiimikaadeed, waxaana ay la wadaagaan qaar badan oo ka mid ah guryaha aan laheyn. Waxaa lagu xayeysiiyaa xilliyada 1000 sida xooggan oo ah burcad-badeed (saldhigga koowaad), oo fiiro gaar ah u leh qiyaasta saxda ah, waana in aan la qaadin cid kale nootropics wada.
Waxaa lagu hormariyay badiba qaab beddelaad ah oo lagu beddelayo Unifiram.
Ujeedadu waxay tahay in la hormariyo xusuusta, barashada, fekerka cad, diirada, dhiirigelinta, aragtida iyo niyadda.
qiyaasta: Ma jiraan daraasado macno leh, laakiin waxaa la go'aamiyay in 5 - 10mg maalintii ay tahay tan ugu fiican dadka badankood.
Sunifiram waa in aan la dhaafin ama lagu qasi karin diirad kale.
Isticmaalayaasha muddada dheer waxay soo tebiyaan samaynta dulqaad, taas oo ah sababta ay u isticmaali karto kali ahaaneed ama wareegyada.
Waxay u shaqeysaa AMPA agonist waxayna kordhisaa wax soo saarka glutamine, sidoo kale sii deynta asetylcholine ee kortex maskaxda.
Inkasta oo aan wax saameyn ah laga helin cilmi-baaris, Sunifiram wuxuu sababi karaa waxyeelo daran sida lulmidda, hurdada iyo madax-xanuun haddii ay dhacdo xad dhaaf.
Bromantane waa dardar-dhaliye oo gacan ka geysanaya horumarinta ciyaaraha fudud. Marka la isticmaalo toddobaadkii hal mar, jidhku ma aha inuu u dulqaadan karo dulqaadkiisa, oo uu ku sii adkaysto daroogada.
Waxay u muuqataa in lagu xakameynayo waxyeelada hurdo-hurda ee aan wax-qabadka lahayn iyada oo aan wax-qabashada awoodda garashada. Intaa waxaa dheer, xaaladaha caadiga ah (marka uusan hurdada ka maqnayn) waxay kordhin kartaa feejignaanta iyo awoodda shaqo.
Farsamaynta ficilka modafinil si buuxda looma fahmin. Waxaa la rumeysan yahay in ay kordhiso diiradda dadka qaba neurotransmitters ee maskaxda ah.
Bromantane waxay hagaajinaysaa waxqabadka meelaha qaarkood, sida xasuusta shaqada, xasuusta waqtiga dheer iyo kartida fikirka.
Bromantane waxay yareyn kartaa saameynta daawooyinka qaarkood iyadoo la xoojinayo burburka. Kuwaas waxaa ka mid ah: itraconazole, ciclosporin, temazepam, amitriptyline, erythromycin.
Haddii walxaha dhiig-yareeya sida aspirin ama warfarin la qaado, waa inaad si joogta ah u baartaa xinjirta dhiiggaaga.
Sharaxaada daroogada ee Smart
Armodafinil, waa kiimiko adag oo caddaan ah. Magaca kiimikada 2 - [(R) - (diphenylmethyl) sulfinyl] acetamide oo leh qaab kale oo molecular ah C 15 H 15 MAYA 2 S oo leh miisaankiisu yahay molecular 273.35000 iyo dhibicda xaddiga 156 ee 158 C. Amofenib waa daroogo kiciya oo badanaa loo isticmaalaa daaweynta nikotubigga, niyadjabka, hurdada idiopathic ama narkolepsi inta lagu jiro maalinta.
Caanaha nafaqada: C 15 H 15 MAYA 2 S
Miisaanka miisaanka: 273.35000
Tayada saxda ah: 273.008200
Muuqaal iyo sifooyin: cad adag
Cufnaanta: 1.283g / cm 3
Xaaladda dhibicda: 156-158oC
Kumbaska: 559.1oC at 760mmHg
Xarrago flash: 292oC
Cadaadiska uumiga: 1.56E-12mmHg at 25C
Waxyaabahani waxay kordhin karaan waxqabadka maskaxda maskaxda ee qiyaasta daaweynta iyo kordhinta waxqabadka dareemayaasha qaybaha kala duwan ee maskaxda. Waxyaabahani wuxuu soo saaraa farxad maskaxeed oo la mid ah kiciyaasha habdhiska dhexe ee habdhiska dareemayaasha, hagaajinta dabeecadda, dareenka, fikirka iyo shucuurta. Saameynta waxtarka leh ee macaamiishani waxay noqon kartaa iyada oo lagu daro dheecaanka glutamine, kaas oo yareynaya wax soo saarka gamma-aminobutyric acid (GABA) wuxuuna kor u qaadaa hawlaha dheef-shiid kiimikaadka iyo tamarta tamarta ee unugyada dareemayaasha.
Badeecadani si deg deg ah ayeyna ufududeysaa ka dib markii maamulka afka. Fiirinta plasma waxay gaartaa heerka ugu sarreysa ee ku saabsan 2 ilaa saacadaha 4. Cuntadu ma saameynayso bioavailability ee sheyga, laakiin waxay dib u dhigi kartaa nuugista daroogada oo dib u dhigto xaddiga fiiqan by 1 h. Waxyaabahaan waxaa si ballaaran loogu qaybiyaa jirka, mugga qeybinta waa wax ku saabsan 0.9L / kg, oo ka sarreeya wadarta jirka ee 0.6L / kg. Qiyaasta dheellitirka borotiinka plasma waa 60%, taas oo inta badan lagu daro albumka plasma. Kadib markii maamulka mgmaanka 200 maalin kasta, diirada qulqulatada daawada ayaa la gaarsiiyey xaalad deg deg ah, mana saameynin borotiinka plasma oo ku xiran warfarin, diazepam, iyo propranolol. Modafinil waxaa lagu gartey nidaamka cytochrome P450 ee CYP3A4 ee beerka. Sidaa daraadeed, isticmaalka isku dhafan ee CYP3A4 inducer ama inhibitor wuxuu saameynayaa xoojinta dhiigga iyo muddada falgalka sheygan. Waxyaabahani waxa uu ka kooban yahay beerka si uu u soo saaro laba metaboolo waaweyn, modafinic acid iyo modafinilone, taas oo aan laheyn wax daaweyn ah. Metabolitir waxay xisaabtamaan 90% iyo daawooyinka waalidkood ee aan laga fogeyn waxay ka yaryihiin 10%. Daawada ayaa ka baxda kelyaha, iyo in la joojiyo nolosha nuska ah ee daroogadu waa saacadaha 10-15. Heerka nadiifinta daroogada ee dumarka da'da yar ayaa ka sarreeya ragga dhallinyarada ah, iyo heerka cadadka dadka waayeelka ahi aad bay uga hooseeyaan kuwa dhallinyarada ah.
Barta dhalaalida: 164-166 C
Modafinil wuxuu kordhin karaa kacsanaanta dhexe ee dadka caadiga ah. Kormeerka EEG laga bilaabo saacadda ugu horreysa illaa saacadda 22aad kadib modafinil afka ah waxay muujineysaa in qiimaha reflect / reflect ee ka tarjumaya feejignaanta uu sarreeyo, iyo mowjadaha hurdo-yar ee mararka qaarkood ku dhowaad gebi ahaanba la xakameynayo. Dadka hurdo la'aanta ah, hurdo la'aanta waxay sababi kartaa feejignaanta dadka iyo awooda ay ku shaqeeyaan.
Qaadashada modafinil waxay si wax ku ool ah u wanaajin kartaa xaaladdan. Cilmi-baaristu waxay muujisay in ka dib markii habeenkii hurdo la'aanta, ka qaadashada mgmaanta mg ee modafinil, awoodda maskaxeed ee mutadawiciinta ayaa si aad ah uga sarreeya kooxda ka soo horjeeda; Xilliga saacada 200 ee hurdada oo idil, saacadood kasta 60 mg Dalfene 8 ayaa wali awood u leh inay sii wadaan xaruntii hurdada oo laga xayuubiyo xaalad farxad leh, si ay u ilaaliyaan feejignaan iyo awood u leh inay shaqeeyaan. Modafinil sidoo kale wuxuu leeyahay saameyn gaar ah neuroprotective. Waxaa laga helay noocyada xayawaanka ee dhaawaca maskaxda ee modafinil si wax ku ool ah uga hortagi karto wax soo saarka 200-methyl-1-phenyl-4-tetrahydropyridine.
Saameynta neurotoxiska ayaa calaamadaha si weyn u yareynaya. Dhibaatooyinka neuroprotective ee modafinil ayaa sidoo kale lagu xaqiijiyey habka dhaawaca farsamada iyo qaabka dhaawaca ischemic, siday u kala horreeyaan. Ficil-celinta dhexdhexaadka ah ee modafinil wuxuu la xiriiraa hoos u dhaca nurotransmitter-ka, GABA, waxaana lagu maamulaa serotonin (5-HT) iyo norepinephrine. Daraasadan ayaa lagu ogaaday in saameynta miisaanka dhexe ee modafinil ay noqon karto kororka glutamine synthetase, taas oo yareyneysa wax soo saarka GABA, iyo kor u qaadida ficil-celinta iyo dhaqdhaqaaqa tamarta jirka ee unugyada dareemayaasha.
Badeecadani si deg deg ah ayeyna ufududeysaa ka dib markii maamulka afka. Fiirinta plasma waxay gaartaa heerka ugu sarreysa ee ku saabsan 2 ilaa saacadaha 4. Cuntadu ma saameynayso bioavailability ee sheyga, laakiin waxay dib u dhigi kartaa nuugista daroogada oo dib u dhigto xaddiga fiiqan by 1 h. Waxyaabahaan waxaa si ballaaran loogu qaybiyaa jirka, mugga qeybinta waa wax ku saabsan 0.9L / kg, oo ka sarreeya wadarta jirka O.6L / kg. Qiyaasta dheellitirka borotiinka plasma waa 60%, taas oo inta badan lagu daro albumka plasma. Kadib markii maamulka mgmaanka 200 maalin kasta, diirada qulqulatada daawada ayaa la gaarsiiyey xaalad deg deg ah, mana saameynin borotiinka plasma oo ku xiran warfarin, diazepam, iyo propranolol.
Modafinil waxaa lagu gartaa nidaamka cytochrome P450 ee CYP3A4 ee beerka. Sidaa daraadeed, isticmaalka isku dhafan ee CYP3A4 inducer ama inhibitor wuxuu saameynayaa xaddiga dhiigga iyo muddada falgalka sheygan. Waxyaabahani waxa uu ka kooban yahay beerka si uu u soo saaro laba metaboolo waaweyn, modafinic acid iyo modafinilone, taas oo aan laheyn wax daaweyn ah. Metabolitir waxay xisaabtamaan 90% iyo daawooyinka waalidkood ee aan laga fogeyn waxay ka yaryihiin 10%. Daawada ayaa ka baxda kelyaha, iyo in la joojiyo nolosha nuska ah ee daroogadu waa saacadaha 10-15. Heerka nadiifinta daroogada ee dumarka da'da yar ayaa ka sarreeya ragga dhallinyarada ah, iyo heerka cadadka dadka waayeelka ahi aad bay uga hooseeyaan kuwa dhallinyarada ah.
4. Waxyaabahani waxay yareyn karaan saameynta daaweynta ee p-pillerka. Tallaabooyin kale oo looga hortago uur-qaadis kale waa in la qaataa inta lagu jiro isticmaalka badeecadaan iyo hal bil gudaheed ka dib joojinta daroogada.
Noopept qayb ahaan ayaa la taaban karo iyada oo la sameynaayo phenylacetylproline, cycloprolylglycine iyo phenylacetic acid. Nolosha nuska ah ee noopept waxay gaadho saacadaha 0.38.
Caanaha naasku waa C17H22N2O4
Miisaanka Molecular 318.37
Noopept laguma ururin jirka.
Farsameynta ficil-celinta nootropic ee daroogada waxay ku salaysan tahay awoodda ay u leedahay in ay sameysato cycloprolylglycine oo isku mid ah qaab dhismeedka dooxada dipeptide ee daba-dheeraada.
Diyaargarowga Noopept wuxuu kor u qaadaa xajmiga jawaabta jaaniska, wuxuu fududeeyaa isku xirnaanshaha xiriirka heerka heerarka kortikal ee u dhexeeya maskaxda maskaxda.
Marka la isticmaalo daroogada Hoenopt, dib u soo kabashada hawlaha garashada, hoos u dhac ku yimaada dhaawacyada craniocerebral, dhaawacyada dhalmada, iyo sidoo kale iskudhaca gudaha iyo caalamiga, ayaa lagu xusay.
Bukaannada qaba dhirta dabiiciga ah ee habka dhexe ee dareenka, saameynta daawada Hoenopt waxay ku dhacdaa maalinta 5th-7th ee daaweynta. Bilowga daaweynta, walaaca iyo waxyeellada qaar ee saameynta daawada Hoenopt waa mid aad u caansan, oo ay ka mid tahay hoos u dhaca walaaca iyo hagaajinta hurdada ee bukaanada. 2-3 ka dib markii la bilaabay daweynta, waxaa jira horumarin la taaban karo oo ku saabsan hawlaha garashada.
Noopept waxaa kale oo ay leedahay saamaynta qulqulatada (waxay yareeysaa madax-xanuunada, taakawidhiyaasha iyo cudurrada caadiga ah).
Daawada Hoenopt maaha mid lagu garto teratogenic, saameynta immunotoxic iyo mutagenic. Noopept ma keento maandooriye, ka dib joojinta daaweynta bukaanka ee ma jiro wax horumarin ah oo ka mid ah cillad joojinta.
Ka dib markii maamulka afka, noopept waxaa si fiican loo nuugay habka dheef-shiidka. Bioavailability of noopept gaari karo 99.7%. Qaybta firfircoon waxay ku gaabisaa barxadda dhiigga, halka feejignaanta ku jirta dheecaanka synovial ka badan yahay xajmiga plazma.
Xasaasiyaadka qiyaasaha ee xajmiga ayaa lagu helaa daqiiqado 15 ka dib markii maamulka afka.
Noopept waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo bukaannada kala duwan ee da'da kala duwan (dadka waaweyn iyo dadka buka waayeelka ah) oo ka cabanaya maqnaanshaha garashada iyo dareenka shucuurta ee jilicsanaanta kala duwan. Gaar ahaan, daroogada Noopept ayaa la qori karaa dhaawaca maskaxda ee jilicsan iyo coma, iyo sidoo kale bukaanada qaba maskax-wareerka wareegga maskaxda (oo ay ku jiraan encephalopathy of etiologies kala duwan) iyo xanuunka asthenic.
Noopept waxaa loo magacaabi karaa si loo xoojiyo hawlaha garashada (xasuusta, xoojinta iyo kartida barashada) bukaanada leh walaac jidheed, garasho iyo dareen dareen leh.
Noopept waa isticmaalka afka. Kiniinnada waa in la qaataa cuntada kadib, biyo badan oo la cabbo ama shaah aan qoyanayn. Bilawga daaweynta, sida caadiga ah, waxay magacaabeysaa xmUMX mg ah oo ah laba jeer maalintii. Haddii ay dhacdo in saameynta daaweynta aan loo baahnayn iyo daawada Hoenopt si fiican u dulqaadanayaan bukaannada, qiyaasta ayaa loo kordhiyaa xaddiga 10 saddexdii jeer maalintii.
J147 CAS 1146963-51-0 waxay leedahay qooyska Racetame; Maaddooyinka ku jira kooxdan waxay la mid yihiin qaabdhismeedka, laakiin waxay ku kala duwan yihiin sifooyinka kiimikada.
MOSA CUMARKA 350.34 g · mol-1
Dhamaan Racetams way ka gudbi karaan caqabadda maskaxda-maskaxda (heerar kala duwan); Pramiracetam waxay leedahay dheecaanka dufanka ugu weyn ee caanka ah ee loo yaqaan 'Racetame', oo si dhakhso leh ayuu jidhku u nuugaa - laga yaabee inay tahay awoodda ay u leedahay inay uga gudubto lakabka laba-labka ah.
Baarayaasha qaar waxay u maleeyaan inay 5-10x ka xoog badan tahay sida ay u taqaano waxyaabaha laga helo ”. Piracetam ".
Waxay ka duwan tahay inta badan walaalahiisa iyada oo loo marayo awooda inuu ku kordhiyo xoojinta. Intaa waxa dheer, waxay leedahay qaababka kale ee Racetam, sida xasuusta korodhka iyo awoodda barashada.
Waxaa la aaminsan yahay in qaabka qaabdhismeedka leh ee phenethylamine ay masuul ka tahay saameynta kicinta. Halkaan, cilmi-baarista badankeeda waxaa lagu sameeyey kaliya dadka ku dhibaatooday xasaasiyadda xasuusta ay keento dhaawacyada maskaxda ama maskaxda.
Bukaansocod-ku-qabad yar oo la siiyay qiyaasta maalinlaha ah ee 200mg waxay arkeen hagaajinta xaaladaha walaaca, xanuunka, iyo niyad-jabka.
Daraasado kale ayaa sidoo kale xusay horumarinta xasuusta iyo xusuusta.
Malaha malaha anticonvulsant iyo garashada garashada waxay ku xiran tahay qaybta piracetam ee dhismaha molecular.
Inkasta oo saynisyahannadu aysan hubin habka saxda ah ee ficilka piracetam, waxay rumaysan yihiin in korodhka unugyada iyo xeerarka glutamate ay mas'uul ka yihiin saameynta.
Waxaa jira warbixino badan oo ka yimaada dadka isticmaala iyaga oo tilmaamaya in si deg deg ah loo dulqaadan karo saameynta dhiirigelinta fenylpiracetam.
Arrinta xiisaha leh, isbeddellada nukroorka qaarkood ayaa lagu xusay: xayawaanka ka soo jeeda sunifiram waxay kor u qaadeen fosforyelka maaddooyinka kala duwan ee maskaxda, kuwaas oo si dhow ula xiriira hababka barashada iyo xasuusta.
Caanaha nooca C14H18N2O2
MOSA CIIDAMADA 246.304 g / mol
Xayawaannada tijaabada ah ayaa loo kala qaybiyay laba kooxood: Hal qeyb ayaa loo keenay Sunifiram, midna waxba ma helin. Kadibna, kartida xasuusta ee xayawaanka waxaa lagu baari jiray caawimaadda Y-majaajilaha iyo baaritaanka aqoonsiga sheyga ayaa la qaaday.
Gabagabada soo socota ayaa la helay: Xayawaanka la siiyey sunifiram waxay leeyihiin natiijooyin wanaagsan.
Sunifirams wuxuu saameyn ku yeeshay niyad-jabka: Lama helin farqi u dhexeeya labada kooxood. Si xiiso leh, badankooda markhaatiyada internetka waxay muujinayaan saameyn liddi ku ah antidepressant.
Daraasado horudhac ah ayaa soo gudbisay labo farsamo oo ficil ah:
1. Qaabka Sunifiram wuxuu la mid yahay kuwa kale Ampakines. Waxay u shaqeysaa iyada oo la hawlgelinayo soo dejiyeyaasha AMPA. Daraasad sahlan, xayawaanka ayaa markii hore la siiyay AMPA antagonist NBQX. Kadib markii la quudiyo Sunifiram xayawaanka, waxay u muuqatay in ay soo celiso saameynta NBQX. Iyada oo ah AMPA dhibbanaha wuxuu kor u qaadi karaa xasuusta, kartida barashada, dareenka iyo feejignaanta.
2. Haddii kale, sunifiram ayaa u muuqda in ay sii daayaan acetylcholine ee kortex maskaxda. Marka loo yaqaano cholinergic, waxaa laga yaabaa inuu hagaajiyo xusuusta gaaban, xusuusta waqtiga dheer, iyo xirfadaha dhaqdhaqaaqa. Si loo xaqiijiyo saameyntan, daraasado badan ayaa loo baahan yahay in la daabaco.
Daraasad lagu ogaaday natiijada sunifiram (0.001 mg / kg qiyaasta waxtarka ugu yar), wax saameyn ah looma arkin qiyaasta la isku duro (jiirka) ee 1 mg / kg.
Nasiib darro, ma jiraan wax cilmi ah oo kiliinikaro, oo ku salaysan waayo-aragnimada dadka isticmaala. General Sunifiram waxay ka badan tahay qiyaasta macquulka ah ee loo qoondeeyey si ammaan ah, laakiin waa inaysan marnaba la dhaafin oo aan la isticmaalin nootropics.
Waxaa lagula talinayaa inaadan Bromantane ka qaadin wax ka badan 3 toddobaadkii. Sidoo kale isticmaalka muddada-dheer waa inaad doorbidaa adiga la'aanteed.
CAS Tirada: 87913-26- 6
Caanaha nafaqada: C16H20BrN
Miisaanka miisaanka: 306.24
MOL Faylka: 87913-26-6.mol
Soo koobista daroogooyinka
Muxuu nootropics ahayn:
• Ma noqon doontid maskax sarreysa habeen, sida ku jirta filimka “Limitless”. Ka fikir sida kaabis aad u isticmaali karto si aad uga faa'iideysato.
• Nootropics ma badaleyso cunto caafimaad leh, jimicsi joogta ah, iyo hurdo ku filan.
• Sidoo kale baaritaanka IQ lama filayo boodbood aad u ballaaran.
Sidee buu u shaqeeyaa maandooriye nootropic?
Nootropics waxay ku shaqeysaa adigoo badalaya waxyaabaha soo socda:
Dheef-shiid kiimikaad sarreeya, oxygenation of brain, helitaanka unugyada maskaxda, koritaanka unugyada.
Saameynta saxda ah waxay ku xiran tahay diyaarinta.
Isbedelkee ayaa la filayaa?
Iyada oo hadba ku xiran tahay sheyga, hagaajinta waxaa laga filan karaa meelaha soo socda:
• Awood u leh in la xoojiyo
• xusuusta xeebta
• Awoodda barashada
• xusuusta shaqada
• Wabiga erayga / codkarka
• Awooda lagu xallin karo dhibaatooyinka (socodka fikirka)
Marka laga soo tago koritaanka neerfalka waxaa ka dhalan kara isbeddel sax ah oo ku saabsan tayada hurdada, xanuunada walaaca, la xiriirka walaaca, xishoodka, cabsida wareega, dareenka iyo dhiirigelinta la filayo.
Ma Nootropics Isticmaalid
Qiyaas ahaan hadlaya: maya. Kiciyeyaasha sida kafeyn, sulbutiamine, iyo modafinil, taasi waa sheeko kale.
Waqtiga illaa bilawga saameynta
Tani ma noqon karto mid guud, waxay ku xiran tahay sheyga, iyo user. Qodobbada soo socda waa celcelis ahaan waxayna kala duwanaan karaan.
Kiciyeyaasha / soo kiciyayaasha (kafee, modafinil, iwm.) - 30 daqiiqo illaa dhowr saacadood gudahood.
Nootropics-ku-saleysan nafaqo (Creatine, Omega-3) - Badanaa 4 ilaa 8 toddobaad gudahood.
Piracetam - 2 - 4 toddobaad gudahood. Tijaabo tijaabo waa in la sameeyaa ugu yaraan laba toddobaad.
8 Iskuulada Dumarka ee ugu Wanaagsan ee Dunida Dunida 10ka ugu sareeya aduunka ee iibinta culeyska luminta budada